January 2018 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Halkaan ka dhegeyso dhuuxa wareysiyada 15-05-1439
guuleed	 Jan 31, 2018 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo ximbaarsan macluumaad muhiim ah. Halkaan ka dhegeyso dhuuxa wareysiyada 31 01 2018
Afar Xisbi oo Soo Cusbooneysiiyay Xiisaddii Farmaajo Iyo Mucaaradkiisa.
cusmaan	 Jan 31, 2018 0
Afar xisbi oo kamid ah axsaabta siyaasadda ee ku olloga ah dowladda federalka ayaa mar qura iyagoo isku duuban cod dheer kusoo cusbooneysiiyay khilaafkii ka dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka dhexdeeda ah ah ee ku kacsan. Xisbiyada kala…
Halkan ka dhageyso Warka duhurnimo 14-05-1439
Insha allaah halkaan waaxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo qodobo kala duwan lagu soo waatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 31 01 2018
Dayuurad Mareykanku Leeyahay oo Kusoo Dhacday J/hoose.
Dayuurad nooca wax basaasa oo Drone ah ayaa kusoo dhacday degaan dhaca duleedka magaalada Kismaayo oo lagu magacaabo Beerxaani. Wararka halkaas ka imanaya ayaa sheegaya in dayuuradan oo saacado badan dul heehaabeysay magaalada ay soo…
Halkaan ka dhegeyso warka subaxnimo 14-05-1439
Halkaan ka dhegeyso warka subaxnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war subax 31 01 2018
Dhagayso Dhuuxa Waraysiyada 30-01-2018
cusmaan	 Jan 30, 2018 0
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen weliba marka laga reebo Jimcaha kabaxa Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa waraysiyo xiiso badan iyo dhacdooyinka ka taagan dalka. Halkan ka dhagayso…
Halkan ka dhageyso warka duhurnimo 13-05-1439
guuleed	 Jan 30, 2018 0
Warka duhurnimo waxaa lagu soo qaatay qarax ka dhacay goballada Barri iyo jubadda hoose iyo qodobo kale ee kala deg qeybta hoose. Halkan kala deg warka duhur 30 01 2018.lite
Ciidamada Kenya oo weerar kula kulmay dulleedka Hosingow.
Qarax xooggan ayaa lala eegtay kolonyo Kenyaati ah oo marayay inta udhaxaysa Magaalada Dhoobley iyo Hosingow oo kawada tirsan gobalka jubada hoose. Ciidanka ayaa ka baxay Magaalada Dhoobley iyagoo kusii socday deegaanka Hosingow oo…
Gaari Dagaal oo Bari Looga Gubay Maamulka Puntalnd.
Gaari dagaal ayaa ciidamada Puntaland looga gubay weerar maanta ka dhacay gobolka Bari, waxaana lasoo sheegayaa in dhammaan askartii saarnayd gaariga ay ku dhinteen. Guutada qaraxyada ee Xarakada Al-Shabaab ayaa gaarigan beegsatay xilli…
Halkan ka dhageyso warka subaxnimo 13-05-1439
Qeybta hoose kala deg warka subaxnimo oo saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka subaxnimo 30 01 2018.lite